Ndị ụgbọ elu Amerịka ga -eso IndiGo soro ụgbọ elu India
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụgbọ elu Amerịka ga -eso IndiGo soro ụgbọ elu India
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
American ụgbọ elu na -amalite ọrụ ọhụrụ n'etiti New York City na isi obodo India Delhi n'ọnwa na -abịa, na n'etiti Seattle, WA na obodo Bengaluru n'isi mbido afọ na -abịa.
Nnukwu ụgbọ elu India na -ekwupụta nkwekọrịta codeshare na American ụgbọ elu n'okporo ụzọ ụlọ.
Nkekọrịta koodu na-enye ohere ka ụgbọelu na-ere oche n'elu ụgbọ elu nke onye mmekọ ya na-arụ, ka o wee nwee ike fega ndị njem ebe ọ naghị eje ozi.
American ụgbọ elu na -amalite ọrụ ọhụrụ n'etiti New York na isi obodo India Delhi n'ọnwa na -abịa.
Ka ụgbọ elu America na -akwado ịmalite ọrụ ọhụrụ n'etiti USA na India, ọ mara ọkwa nkwekọrịta nkekọrịta koodu na onye kacha ebu India IndiGo.
Nkwekọrịta codeshare, nke ekwuputara taa, a na -atụ anya na ọ ga -amalite na Ọktoba, ọ ga -ahụkwa American ụgbọ elu'Koodu na 29 nke ụzọ ụlọ IndiGo na India.
Nkwekọrịta nkekọrịta koodu na-enye ohere ka ndị na-ebu ụgbọelu na-ere oche na ụgbọ elu nke ndị ọrụ ụgbọelu ha na-arụ, ka ha nwee ike fega ndị njem ha ebe ha anaghị eje ozi.
Nkwekọrịta nkwekọrịta koodu indigo, nke bụ ụgbọ elu kacha ukwuu na India site na ọnụ ọgụgụ ndị njem na -ebu, yana nke InterGlobe Aviation, chọrọ nkwado nke ndị isi gọọmentị US na India, American Airlines kwuru.
American ụgbọ elu, Inc. bụ nnukwu ụgbọ elu America nke hiwere isi na Fort Worth, Texas, n'ime Dallas – Fort Worth metroplex. Ọ bụ ụgbọ elu kacha ibu n'ụwa mgbe ejiri nha ụgbọ mmiri tụọ ya, buru ndị njem mere atụmatụ ya, na mile njem ndị na -enweta ego.
indigo bụ ụgbọ elu India dị ọnụ ala nke hiwere isi na Gurgaon, Haryana, India. Ọ bụ ụgbọ elu kacha ukwuu na India site na ndị njem na -ebu na nha ụgbọ mmiri, yana oke ahịa 59.24% nke ụlọ dị ka ọnwa Ọgọst 2020.